कस्ता गुण भएका व्यक्ति संसारमा चम्किन्छन् ? हेर्नुहोस् आजको नीति वचन « Harekpal
कस्ता गुण भएका व्यक्ति संसारमा चम्किन्छन् ? हेर्नुहोस् आजको नीति वचन
आठ गुणः बुद्धि, सुन्दर चरित्र, आत्मनियंत्रण, शास्त्र अध्ययन, साहस, मितभाषिता, यथाशक्ति दान र कृतज्ञता भएका व्यक्ति बत्ती जस्तै संसारमा प्रकाशित हुन्छन् ।
असल व्यक्ति बन्न बोली पनि मीठो हुनु आवश्यक मानिएको छ । मृदु भाषी व्यक्तिलाई नै असलको संज्ञा प्रदान गरिएको छ । दान पनि असल व्यक्तिको अर्को गुण हो । जसले नित्य दान गर्छ त्यो व्यक्ति नै असली हो भनिएको छ । यसैगरी हरेक कार्यमा कृतज्ञ भई कृतज्ञता ज्ञापन गर्न पनि सक्नु पर्दछ । कृतज्ञ हुनु पनि असल व्यक्ति हुने लक्षण हो । अतः असल व्यक्तिका निम्ति यी आठ कुरा हुनु आवश्यक हुन्छ भन्ने नीति वचन मननीछ छ । – नारायणप्रसाद निरौला, ज्योतिषाचार्य, वास्तुविद् –
आज चन्द्रमा धनु राशिमा र सुकर्मा योग, थाहा..
कस्ता कुरामा सदा ख्याल राख्नुपर्छ ? हेर्नुहोस् अजको..
मित्रको परीक्षा कतिबेला हुन्छ ? हेर्नुहोस् आजको नीति..
कस्ता कुरामा सचेत रहनुपर्छ ? हेर्नुहोस् आजको नीति..